Ezona noveli zangoku
Uphengululo lweenoveli zangoku
IParadesi Yesithathu, nguCristian Alarcón
Ubomi abudluli nje njengezakhelo kungekudala ngaphambi kwekhuselo lokukhanya okothusayo kokugqibela (ukuba into enje yenzeka ngokwenene, ngaphaya kweengqikelelo ezidumileyo malunga nomzuzu wokufa). Ngapha koko, ifilimu yethu isihlasela ngezona zihlandlo besingazilindelanga. Ingenzeka emva kwevili ukusizoba ...
KwiLake Success, nguGary Shteyngart
Kungenzeka ukuba u-Ignatius Reilly wayeyi-ad hoc incarnation kaDon Quixote. Ubuncinci kwingcinga yakhe yegeza elibambelele kwindawo yokulwa nezixhobo zomoya ezenziwe isigebenga yintelekelelo ephuphumayo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo uBarry Cohen, umlinganiswa ophambili weli bali nguGary Shteyngart, unokuninzi…
Incwadi yazo zonke iintanda, ngu-Agustín Fernández Mallo
Uncwadi lunethuba lokusisindisa. Ayisengombuzo wokucinga ngamathala eencwadi apho abantwana babantwana bethu banokujongana ingcinga, inzululwazi kunye nolwazi olufakwe ezincwadini njengelungelo elilodwa lomenzi wechiza lenguquko engenakuthintelwa. Siyazi ukuba akukho nto iya kushiywa ngokukhawuleza kunokuba kamva. Yiyo loo nto...
Ibali elihlekisayo, nguLuis Landero
Ibali lalo lonke ibali lothando, nokuba langoku okanye likude, alinakwahluka kakhulu kwinkalo yalo yothando. Ngenxa yokuba inoveli yothando ye-transcendent, njengoko ndingathethi nto malunga nohlobo olupinki, isixelela ngeemvakalelo ezingenakwenzeka ukuba zifikelele esiphelweni ngenxa yemeko yentlalo, kuba ...
Sukuthatha isithsaba sakho kuwe, nguYannick Haenel
Siyalithanda ixesha eliqaqambileyo apho indoda iphakama eluthuthwini lwayo ukuze iqalise ukubhabha kwingcinga yayo ephuphumayo. Ukukholelwa kuloo ndibano kunye nentsingiselo yobomi kunesizathu se-epic. Nangakumbi xa imithwalo yoloyiso iqokelelana kwenye efana ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha20 Elandelayo →